Ny gara dia manana backwash tena mahomby, famokarana mitohy mandeha ho azy. Ny fanjifana rano ambany sy ny famolavolana kely dia manova ny fihodinan'ny backwash eo anelanelan'ny singa mba hiantohana ny vokatra tsy tapaka sy ny fatiantoka tsindry faran'izay kely ny rafitra. Rafitra fanasiana kapila mandeha ho azy miaraka amina singa fanivanana kapila misy valisoa backwash 2 ″ / 3 ″ / 4 ″, manifold, mpanera. Mora apetraka.
1. Manadio tena an-tserasera mandeha ho azy tanteraka; fanjifana rano ambany; famolavolana paikady; fatiantoka tsindry ambany.
2.Manatsara ny zava-bita ary mampihena ny faharetan'ny fikojakojana.
3.Ny fitehirizana rano faran'izay betsaka amin'ny fahombiazan'ny fanasan-damba.
4. Rafitra sivana 4.Disc dia isaky ny mivory ary mora ampiasaina.
5.Modular configurement dia mamela ny famolavolana arakaraka ny safidin'ny mpanjifa na ny fisian'ny habaka.
6.Ny fitaovana anticorrosion hafa dia hampiasaina arakaraka ny toetry ny tontolo iainana.
Previous: Karazana sivana-Hydrocyclone
Manaraka: Mpitifitra basy be
Sivily Backwash mandeha ho azy
Rafitra sivana mandeha ho azy